I-Apple inokwenza iichips zayo zilungelelaniswe neMac entsha | Ndisuka mac
Ukubandakanywa okunokwenzeka Iichips ze-ARM zeeMac ezizayo. Ezi processor, ezisebenzisa iApple kwi-iPhone kunye ne-iPad, zinokusetyenziselwa iikhompyuter zeMac, ngokuchanekileyo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezinganikezelwayo ziichips zeIntel zangoku. Kwaye, ngaphandle kokuxhomekeka kakhulu kuhlobo olunye lwenkqubo. Ngokutsho Uphengululo lweNikkei yaseAsia, Imithombo emibini iqinisekisile abafowunelwa baka-Apple ukuba basebenze kwizixhobo ezinayo yonke into okanye inxenye yesakhiwo sayo ngeetshipsi ze-ARM. Kuhlala kubonakala ukuba iApple ingayalela iichips okanye ziya kwenziwa kuyilo lwesiko leApple.
IiLaptops ziye zinciphe, ngelixa abathengi befuna ukuhamba okungcono kunye nobomi bebhetri obude… Oko kunika uyilo lwe-ARM, olwaziwayo ngokusebenza kwayo ngamandla, lithuba elihle kakhulu.
Okwangoku, akukho mithombo yeendaba egwebe ngokuxhasa intlanganiso yeeapps kunye nabaphathi be-ARM. Ngaphezulu kwayo nayiphi na into ziingcinga zentengiso kunye notyekelo lweemarike ezifuna izixhobo ezikhulu kakhulu ngokusetyenziswa kancinci.
U-Apple utyale imali eninzi kuphando nakuphuhliso kule minyaka idlulileyo, ukuqhubela phambili kuyilo lwezixhobo zexesha elizayo, kodwa ukunqanda ukulahla okunokwenzeka ngokuchasene nenkampani ngumboneleli onobunzima obuninzi. Eminye imithombo ilumkisa ukuba ukongeza kwimali eyabelwe ukuphuhlisa obu buchwephesha, kungathatha ukuqesha iinjineli ezingaphezu kwewaka.
Kwelinye icala, iApple iqesha abasebenzi I-AU Optronics, kunye nabasebenzi abavela kumenzi womboniso ophambili waseTaiwan, I-Novatek. Ke ngoko, ukubakho kokuyilwa kweetshipsi ezintsha zethu kubalulekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple inokwenza iichips zayo zilungelelaniswe neeMacs ezintsha